Sirdoonka Sirdoonka ee ASELSAN waxay ka shaqeeyaan Gawaarida Dhulka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSirdoonka sirdoonka ASELSAN waxay ka shaqeeyaan Gawaarida Dhulka
Sirdoonka sirdoonka ASELSAN waxay ka shaqeeyaan Gawaarida Dhulka
21 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Kara, Headline, ISDIFAACA, TURKEY
Daraasado sirdoon oo sirdoon oo ku saabsan baabuurta dhulka
Difaaca Turk, oo ah mid ka mid ah hogaamiyaasha hormuudka u ah ururrada warshadaha difaaca ASELSAN ee Turkiga; waxay ku qaaddaa saanad caqli gal ah taangiyada iyo gawaarida gaashaaman.
Hubka nuuradda leh 35mm
Waxaa soo saarey ASELSAN iyadoo la kaashanayo TÜBİTAK SAGE iyo MKE, KORKUT iyo Qalabka Maareynta Dabka (AIC) iyo hubka halista ah ee 35mm, oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee gantaalaha hawada dhulka lagu aaso; Waxaa la waafajiyey aaggan iyadoo la qiimeynayo in gawaarida gaashaaman ay kordhin doonaan waxtarka muuqda. Nidaamka Hubka 35-aad ee KORHAN, oo ay ku jirto horumarin ay sameysay ASELSAN, adeegsiga rasaastaani waxay siineysaa nidaamka hubka mid muhiim ah. Rasaasta la isweydaarsanayo ayaa si gaar ah loo soo saaray si loo helo wax ku oolnimada bartilmaamedyada dhallaanka, gawaarida gaashaaman iyo dareemayaasha muhiimka ah ee gawaarida culus.
Nidaamka difaaca hawada aselsan
Tirada iyo taxanaha walxaha rasaasta ayaa la cusbooneysiiyay si loo kordhiyo cufnaanta walxaha ee bartilmaameedka, iyo tirada wax ku oolka ah ee rasaasta la bartilmaameedsaday ayaa la kordhiyay. Rasaasta ayaan la diyaarin karin lagumana tuurayaa markii loo baahdo waxayna bixin kartaa waxqabadka sare ee qalabka wax lagu galiyo gawaarida gaashaaman, dhismayaasha iyo baararka.
Rasaasta la soo saaray waxay u isticmaashaa isla agab iyo softiweer sida 35 mm Walxaha Ambulance ee xakamaynta dabka. Qaabkaas, waxaa suurtogal ah in loo adeegsado rasaastaan ​​aaladda KORKUT iyo AIC + MÇT, iyo sidoo kale adeegsiga 35mm Qeyb ka mid ah rasaasta loo adeegsado ujeedooyinka difaaca hawada ee nidaamyada sida KORHAN.
40mm Xawaare Sare oo Fudud oo Bilaash ah oo Amniyo ah
ASELSAN waxay diyaarisay 35mm High Speed ​​Smart Grenade Launcher Ammunition iyadoo la adeegsanaayo waaya-aragnimadeeda ku saabsan samaynta 40mm Walxaha rasaasta. Rasaasta la isweydaarsanayo waxay awood u leedahay inay curyaamiso hawada markii lagu diyaarinayo ka bixida foostada waxaana si guul leh loogu adeegsan karaa ka hortagga mini UAVs haddii la isku daro labadaba bartilmaameedyada ka dambeeya caanaha iyo nidaamka IHTAR. Rasaasta laga tuuri karo qoryaha MK19 ee lagu rakibay nidaamyada taliska fog ee rasaasta ayaa loo adeegsan karaa sidii rasaasta lidka ku ah shaqaalaha ka hortagga ee baabuurta leh nidaamka SARP.
mm mabaadiida shaqada barnaamijka
Qalabka Taangiyada 120mm ee Sirdoonka
Shaqada ay ASELSAN ka fulisay duurka milateriga caqliga badan lehna leh nambarka dhexdhexaadka ah ayaa la ballaariyay oo daraasado sahamin oo caqli gal ah ayaa loo bilaabay taangiga iyo rasaasta rasaasta. Macnaha guud, sidoo kale waxaa jira daraasado lagu bixinayo sabab loo adeegsado rasaasta nooc 120mm oo nooca HE ah. Waxaa lagu kobciyay iyadoo lagu dhex darayo walxaha caqliga leh ee loo yaqaan '120 mm HE', oo ah 120 mm Smart Tank Ammunition (120 mm ATM) waxay lahaan doontaa isku hagaajinta waqtiga elektiroonigga ah iyo saameyn elektiroonig ah.
Iyada oo la adeegsanayo ATM-ka '120mm ATM', waxaa looga golleeyahay in lagu takhaluso hanjabaadaha la ilaaliyo / ee aan la ilaalin ee ku qarsoon / qarsoon ee boosaska la-dagaallanka asagoo bixinaya lacag. 120mm ATM waxay noqon doontaa xalka aad wax ku oolka u ah baabi'inta nidaamyada halista ah (tusaale ahaan, qalqal-galyada) gawaarida farsamaysan ee ku jirta walxaha cadowga, waxaana la hubin doonaa in xubnahan aysan awoodi doonin inay u adeegaan suurtagalnimo sarreysa masaafo dheer.
altay atis e
Furaash la soo afjaray oo loogu talagalay 155mm rasaas rasaas ah
Waxyaabaha isticmaala waxaa si weyn u weydiisanaya adeegsadaha marka la eego wax ku oolnimada waxqabadka iyadoo la saxo jidka duulimaadka rasaasta madaafiicda. Waxqabadka ASELSAN ee ujeeddadan ayaa ku bilaabmay kobcinta baakad ganaax ah oo ay kujirto astaamo iskuxirayaal ujeeddo badan leh oo la adeegi doona 155mm rasaas caliber ah, oo loogu talagalay in lagu ballaariyo daraasadda aalado kaladuwan.
Xigasho: Agaasinka injineernimada sistem - khabiir ku xeel dheer injineerka Gökmen Cengiz | Codsiyada Ambalaaska smart ee Taangiyada iyo Gawaarida Armo - Aselsan Magazine Issue 105
Calaamadaha Calaamadaha Magaalada ee ka yimaada Smart City
Gaadiidka Milatariga iyo rasaasta la rakibay Tababarka 10 Maalmaha Sugida Xarunta Bilecik (Video)
Oggolaanshaha Aasaaska Naqshadeynta Wareegga Aasaasiga ah ee ASELSAN ee Turk Loydu
Waxqabadka Qalalaasaha Xeeladeed ee Sakarya wuxuu ku sii socdaa Full Speed
Howl-galka Nidaamka Nidaamka Gaadiidka ee Sirdoonka ah ayaa laga bilaabay Sakarya
Hawlaha Golaha ee loogu talagalay Smart Baaskiillada Ka Bilaabmay Sakarya
Miraha Shaqada Mashruuca ee Bursa Smart City
Sirdoonka guud ee nidaamka gaadiidka caqli-gal ah
Ciidamo millatari ayaa ku qarxay saldhig tareen Donguz oo ku yaala magaalada Orenburg ee dalka Ruushka
Rag hubaal ah ayaa laga sii daayay xayiraadda Marmaray
Gaadiidka rasmiga ah ee Ruushka ayaa qarxay Tareenka Trans-Siberian muddo gaaban
Ogeysiiska Qandaraaska: Hubinta Qalabka iyo Nadiifinta
Isdhaxgalka rasaasta ee AKSUNGUR Gawaarida Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ayaa bilaabatay
Ambulance smart Tank
Aaladda Maareynta Dabka
Hubka noocan oo kale ah haanta a
Xawaaraha Sare ee Smart Grenade Launcher rasaas
Muddada Fogaanshaha Bulshada ee Goobaha Cagaaran ee Izmir
Shaqaalaha IMM waxay ku kulmaan 'Tababbarro Cimilada Sare Sustainable'
Casriyeynta farsamooyinka ee tareenada mootooyinka laga soo galo Shiinaha Shiinaha ee loogu talagalay Ankara Metro
Mustaqbalka Gaadiidka Qarsoon ee Gaadiidka Korontada